Concealer ကို ဘာကြောင့် အသုံးပြုသင့်သလဲ?? | CosmeticMyanmar
Home » Article » Concealer ကို ဘာကြောင့် အသုံးပြုသင့်သလဲ??
Beauties တို့အားလုံး မင်္ဂလာပါနော်။ ဒီနေ့မှာတော့ Beauties တို့အတွက် Concealer အကြောင်းလေးကို ဝေမျှသွားချင်ပါတယ်။
Concealer ကို ဘာကြောင့်အသုံးပြုကြလဲဆိုတော့ မျက်နှာမှာ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ အလှပျက်စေတဲ့ အပြစ်အနာအဆာ တွေကို ဖုံးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ ဘယ်အရာတွေက အလှပျက်စေလဲဆိုတော့ ဝက်ခြံတွေ၊ အဆီဖုလေးတွေ၊ မွေးရာပါ အမှတ်တွေ၊ အညိုအမည်းဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေ၊ အသားအရည် နီမြန်းတာတွေ၊ အမာရွတ်တွေ၊ မှဲ့ခြောက်တွေ၊ အရေးအကြောင်းတွေနဲ့ ချွေးပေါက်တွေ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တချို့သူတွေဆိုရင် မေးစေ့နဲ့ နဖူးတွေက မျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့ အသားအရေတွေထက် ပိုပြီး ညိုနေတတ်ပါတယ်။ အဲ့လိုအချိန်မှာလည်း concealer က အသားအရေညီအောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Concealer က ပြစ်ချက် သေးသေးလေးက အစ ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အဓိကအားဖြင့် Concealer ကို cream or liquid type နဲ့ tube type ဆိုပြီး နှစ်မျိုး နှစ်စားတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ Cream or Liquid type အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ကတော့ sponge လေးနဲ့ ဆွဲဆွဲပြီး အလွယ်တကူ အသုံးပြုလို့ရတယ်။ Tube type အသုံးပြု သူတွေအနေနဲ့ကတော့ tube တောင့်လေးနဲ့အလွယ်တကူ ဆွဲလို့ရနေပြန်တာပါပဲ။ Tube type နဲ့ မျက်၀န်းအောက်ကိုအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မျက်၀န်းအောက်ကို တြိဂံ ဇောက်ထိုးသဏ္ဌန် လေးဆွဲပေးရပါမယ်။ ပြီးမှ အပြင်ဘက်သို့ တဖြည်းဖြည်း အောက်ခံမိတ်ကပ်သားနဲ့ တသားတည်းဖြစ်အောင် sponge လေးနဲ့ ဆွဲပေးရပါမယ်။
Beauties တို့အနေနဲ့ နောက်တခုစဉ်းစားရမှာက Concealer ၀ယ်ယူတော့မယ်ဆိုရင်လည်း ပုံမှန် BB, CC, Foundation ဝယ်ယူသလိုပဲ ကိုယ့်အသားအရည်နဲ့လိုက်တာလေးရွေးဝယ်ရပါမယ်။ ပြီးတော့ concealer ရဲ့သက်တမ်းက အများဆုံး ၁နှစ်အထိပဲအသုံးပြုသင့်တယ်နော်။
Beauties အားလုံး ပြစ်ချက်မဲ့တဲ့ အသားအရည်လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနော်။
image source : www.webcrawler.com, pexels.com
သဘာ၀ အိမ်တွင်းပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ ချိုင်းသားလေးဖြူဖွေးအောင်ပြုလုပ်ကြမယ်